Indlela yokucwangciswa ngokufanelekileyo kwesihloko sephepha elingabonakaliyo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokucwangciswa ngokufanelekileyo kwesihloko sephepha elingabonakaliyo?
bazobe ngokuchanekileyo iphepha lencwadi
Okokuqala, kufuneka uqonde ukuba zeziphi iimfuno ezithi ziboniswe kwiziko elithile lemfundo. Umzekelo, ungasebenzisa uyilo lwegraphic okanye hayi, okanye kufanele kubekho uyilo olungqongqo kakhulu.
Kukho uyilo olungqongqo oluqhelekileyo lwephepha lesihloko, apho ephepheni le-A4 liprinta lonke igama leziko lemfundo, phantse embindini (kancinci kancinci phakathi) uyi isihloko sesihloko и into yento, isezantsi kancinci - Igama lomculi. Okulandelayo uyeza igama lobuchwephesha, ikhowudi yeqela.
Ekhoneni ngasekunene kwiphepha kuhlala kukho umhla wokugqitywa kunye nokuthoba umgca Iireyithingi zootitshala.
Shicilela okulandelayo Igama likatitshala kwaye ngezantsi nje kumbindi wephepha igama lesixekoapho umlingisi afunda khona.
Amaziko emfundo ahlukeneyo aninzi ngokufanayo kuyilo lwezincoko, kodwa kusoloko kukho umahluko obalulekileyo. Mhlawumbi le yenye yeendlela zokhuselo ekukhuphelekeni ngobuninzi ... Ubume obuqhelekileyo bephepha lesihloko: kwindawo ephezulu ligama leziko, embindini wephepha eliprintiweyo (ngokufuthi kumanqaku ecaphuni) banesihloko, apha ngezantsi (kaninzi ngasekunene) yidatha yomfundi, ngezantsi embindini igama ligama lesixeko , kwaye emazantsi embindini ingunyaka. Ewe, nakwamanye amaziko emfundo akuvumelekanga ukuthumela imifanekiso kwiphepha lesihloko.
Ngokusisiseko, ukuzalisa iphepha leetranstrik ezifanayo kuyafana. Nangona kunjalo, iimfuno zabanye ootitshala zinokwahluka.
Kuqala kufuneka ugcwalise izihloko zephepha lencwadi ngolandelelwano olulandelayo: Umzekelo, Icandelo loMphathiswa Wezemfundo Ephakamileyo kunye neSekondari. Okulandelayo igama leziko. Umbindi wephepha lesihloko kufuneka ubenomxholo womsebenzi, kwaye ugqitywe phantsi kweliphi inqanaba umsebenzi.
Okulandelayo, kwikona esezantsi ngasekunene, igama nefani yombhali, iklasi okanye iqela, kunye negama nefani katitshala ojonga umsebenzi bagcwalisiwe.
Ngasekupheleni embindini sizalisa umzi kunye nonyaka.
Kuyimfuneko ukuba kubekho isakhelo esinee-indents ezisusela kwimiphetho ezingekho ngaphantsi kwe-0,8 cm. Isakhelo kufuneka senziwe simnyama nje ngaphandle kokuhonjiswa okongeziweyo, emva koko bhala igama leziko lemfundo, ikhosi okanye iklasi, igama lakho lokugqibela, igama eliphakathi, igama lokugqibela lenkokeli kwilungelo elingaphezulu. Embindini wephepha, bhala isihloko sezinto ezingafunwayo, kwaye ukusuka ezantsi embindini wephepha. Kucetyiswa ukuba uprinte wonke umbhalo kwaye ungabhali ngesandla.
Olona lula, ukuba awufuni ngakumbi ukucaphuna; noyilo, kodwa ufuna ukufumana isiphumo esihle esiya kuthi sihlangabezane nemigangatho eyamkelweyo, yenza iphepha elingaphezulu usebenzise iphepha elingaphezulu lomvelisi kwi-intanethi. Oku kungenziwa umzekelo apha.
Ngokulula ufake idatha yakho kwimihlaba yokubhaliweyo kwaye isayithi ivelise iphepha lakho lokufihla.
Khupha iphepha lencwadi iya kwenzeka ngokukuko ngokuchanekileyo isihloko sephephangaphezulu njengesampulu. Kulungile uyilo lwephepha lesihloko yakho thintela kufuneka inenombolo yeempawu zayo ezakukuvumela ukuba uphephe ukungaqondani okunxulumana nako ukwenziwa kokubambisa ngexesha lokujonga.
Isihloko sephepha lokuhanjiswa -Liphepha le A4 liqhelekileyo.
Ubume bephepha bume ngolu hlobo lulandelayo:
indawo ephezulu inalo igama lesikolo sakho;
indawo ephakathi inegama lomsebenzi kunye negama;
kwicala lasekunene lineenkcukacha: igama lombhali walo msebenzi, umcebisi wesayensi, ikhosi, uvavanyo lwalo msebenzi;
umsebenzi nendawo, enzelwe ukutyikitya umfundi, utitshala;
ezantsi ligama lesixeko apho ufunda khona, kunye nonyaka wokubhala umsebenzi.
Kulungile isihloko sephepha.
Ikharityhulamu yesikolo ibandakanya iindlela ngeendlela zokutshekisha izinto ezipasileyo kunye nokudibanisa ezifundileyo. Oku kubandakanya ukuzivocavoca okusebenzayo, iimviwo, umsebenzi weelebhu, iimpendulo zomlomo kwaye, ewe, iincoko. Njengomthetho, i-abstract ibeka izinto ezibonakalayo kumcimbi othile, ukudityaniswa kwawo kusetyenziswa imithombo yolwazi eyahlukeneyo. Ulwazi lokufunda nokubhala luxhomekeke kulwazi lwemithetho ephambili yoyilo lolu hlobo lomsebenzi, esekwe liSebe leMfundo.
Uyilo lwephepha elingaphezulu
Ngaphezulu, qiniseka ukuba ubonakalisa umbutho wemfundo ephezulu, kunye negama lesikolo ofunda kuso.
Embindini wephepha, kufuneka ubhale igama elithi qu; ABSTRACTquot ;, kwaye ngaphantsi kwalo libonisa isihloko sayo. Yisezantsi kancinci, kwicala lasekunene, ubhale amagama kunye nooqobo bomsebenzi owenze lo msebenzi, kunye notitshala owukhangele, kwaye emazantsi embindini wephepha - igama lesixeko ohlala kulo, kanye kulo nyaka.
Ngokubhekisele kwitekisi ye-abstract uqobo. Qiniseka ukuba uqaphela ubungakanani bomda kumaphepha (umda osekhohlo ziimilimitha ezimashumi mathathu anesihlanu, umda ekunene ziimilimitha ezilishumi, kwaye umphambili kunye nesithambile ziimayile ezimashumi amabini ananye), umgca wokulinganisa umnye kwaye unesiqingatha, kwaye i-Times New Roman font ishumi elinesine ubukhulu. Kungcono ukuba ungaqali imihlathi emitsha kwiphepha elitsha, kodwa ubenze bahambe ngokulandelelana ngaphandle kokuphazamiseka.
Akufuneki usebenzise igama lamaqendu akho-uwabhale ngendlela eqhelekileyo, njengayo yonke enye isicatshulwa. Khumbula ukuba akukho ichaphaza lifakwa esiphelweni sentloko.
Amalungu e-semantic ajikelezayo kunye neziphetho
Iikhonsepthi ezisisiseko kufuneka zigqitywe ngokubhalwe ngqindilili, zikrwelele umgca okanye zikhuphele umbandela ukuze kube lula ukuba kufundwe. Ekupheleni komhlathi ngamnye, kuqukunjelwa izigqibo, ngoncedo lomhlathi oqhelekileyo oqala ngala mazwi; isiphelo ... isiphelo; njalo njalo.
Xa ndizalisa iphepha lamaphepha e-abstrists, ndaguqulela kwisebe okanye icandelo. Babenazo iisampulu ezikhethekileyo zamaphepha ezihloko. Ukuba ufuna ukucwangcisa isihloko sephepha elingeloliphi na uhlobo, ke phezulu ephepheni kufuneka ubhale igama leyunivesithi, ifakhalthi, isebe, okhethekileyo. Embindini wephepha bhala isihloko sesincoko sakho. Ezantsi ngasekunene-igama lakho lokugqibela, ikhosi, ikhowudi (ukuba ikhona), igama lokugqibela lentloko, utitshala. Kumazantsi aphakathi, bhala isixeko kunye nonyaka, umzekelo: iMoscow 2012.
Ndandihlala ndjonga isikhundla seenkcukacha ngeli sebe. Yonke into yayingqongqo kuthi kwaye iisampulu zaxhonywa kanye ecaleni kweofisi yentloko (isebe eliyintloko). Ukuze ungaqhuli kwaye ungaphazamisi imibuzo qu; ukuba ungayikhupha njani; Kwakukho iimeko xa oonjingalwazi abanobungozi bengazange bamkele iincoko / amaphepha exesha ngenxa yokuba engazange atyikitywe, igama lakhe eyunivesithi yanikezelwa kulo. Ewe, le nto yiDyunivesithi yaseMoscow. M.V. Lomonosova bekumele ukuba kwiphepha lesihloko.
Umgama phakathi kwezinto ezakhiweyo zesincoko awuzange ufumane mpazamo. Kodwa ukhetho lwalunikezelwa kuprinta, kunokuba iphepha elibhaliweyo elibhalwe ngesandla.
Esikolweni, bakhuphe ngakumbi ngokukhululekileyo - kodwa bahlala bebuza ootitshala xa kunokwenzeka.
Kweliphi na iziko lemfundo kukho isampula yokubhaliswa kwiphepha lencwadi kunye neminye imisebenzi.
Ithemplethi yokuzalisa iphepha letayitile ifuna ukuba ezi zinto zilandelayo zibe phantsi:
Igama elipheleleyo leziko.
Uhlobo lomsebenzi ongenisiweyo (abstract).
Ingqeqesho eyenziweyo into leyo (ulawulo, isayikholoji, uqoqosho, ezomthetho).
Igama lesihloko (ungabhali nje kuphela;
Kugqityiwe: yifani yakho igama, igama, Patronymic, iqela okanye ikhosi yalowo ugqibe ukwenza lo msebenzi.
Intloko: Igama lomfundisi-ntsapho ojonge i-abstract engenisiweyo.
Ezantsi embindini: idolophu apho isikolo sikhona kunye nonyaka.
Emva koko, jolisa kwitemplate engezantsi.
Ukuba sithetha ngemithetho ngokubanzi, ukuzaliswa kohlobo olufanayo, kwaye ke, emva koko kuthatha indlela:
Kwicala elingaphezulu embindini kubhaliwe i-quot; Igama le-Ministry le eyunivesithi;
Ngapha koko, igama leyunivesithi libhaliwe embindini
Bhala ezi ndawo zi-4 zilandelayo kwiziko
uqeqesho locweyo; igama loqeqesho
quot; Umxholo wenqaku lakho lokusebenzela;
Emva koko faka inqaku kwiinqaku ezi-2 ezilungileyo
Kwaye into yokugqibela embindini wokugqibela wephepha elithi; City kunye nonyaka;
Kodwa kwakhona, ndiyaphinda ukuba le yincwadi yesihloko esemgangathweni kwaye kwezinye iiyunivesithi zisebenzisa imigaqo yabo!
Nanku umzekelo ongumzekelo:
Imibuzo ye-60 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,313.